Ireo mpizahatany Rosiana voafandrika any Afrika Atsimo taorian'ny fandrarana ny sidina vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo » Ireo mpizahatany Rosiana voafandrika any Afrika Atsimo taorian'ny fandrarana ny sidina vaovao
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny zotram-piaramanidina izay manohy manidina avy any Afrika Atsimo dia nampitombo ny saran-dàlana, noho ny fisondrotry ny fangatahana, raha mandà ny fiondranana any amin'ireo tsy olom-pirenena EU kosa ireo mpitatitra avy amin'ny Vondrona Eoropeana.
Noraran'ny governemanta Rosiana ny sidina avy any Afrika Atsimo, Botswana, Lesotho, Namibia, Zimbaboe, Mozambika, Madagasikara, Swaziland, Tanzania ary Hong Kong tamin'ny herinandro lasa teo, taorian'ny nahitana ny variana Omicron COVID-19 vaovao.
Amin'izao fotoana izao, dia inoana fa ny Omicron amin'ny coronavirus dia mety efa nentin'ireo mpizahatany niverina avy tany Ejipta tany Rosia, fanambarana izay nolavin'ny manampahefana ara-pahasalamana Rosiana.
Mandra-pahatongan'izany, Rosiana mpiala sasatra an-jatony no voafandrika Afrika Atsimo, tsy afaka nody noho ny fandraràna saika manerana izao rehetra izao ny sidina ivelan'ny faritra.
Araka ny filazan'ny masoivohom-baovaom-panjakana Rosiana, mety ho olom-pirenena Rosiana 1,500 no mbola ao Afrika Atsimo taorian'ny najanon'i Moskoa tampoka ny sidina mpandeha rehetra mankany sy avy any noho ny tahotra COVID-19 vaovao.
Nilaza ny kaonsily jeneralin'i Rosia ao Cape Town fa miezaka mitady safidy hafa amin'ny fandroahana ireo olom-pirenena Rosiana izy ireo, mety ho fanampiana avy amin'ny zotram-piaramanidina Eoropeana sy vahiny hafa.
Araka ny filazan'ny fantsona Telegram an'ny kaonsily, Rosiana hatramin'ny 15 no afaka manidina mody amin'ny sidina sata amin'ny 1 Desambra.
“Araka ny fampitam-baovao voaray, ny sidina fampodiana an-tanindrazana niaraka tamin’ny fanohanan’ny Ethiopian Airlines hotanterahina ny 3 desambra izao amin’ny zotra Cape Town-Addis-Abeba-Moscow”, hoy ihany ny torohevitry ny kaonsily. Ny saran-dalan'ity sidina ara-barotra ity dia miankina amin'ny isan'ny mpandeha namandrika.
Araka ny loharanom-baovao sasany, teratany Rosiana 'am-polony' no nandao an'i Afrika Atsimo tao anatin'ny andro vitsivitsy ho any amin'ny firenena hafa ao amin'ny kaontinanta, izay ahafahan'izy ireo manandrana manohy ny diany hody.
Masoivoho izay manohy ny sidina avy Afrika Atsimo dia nampitombo ny saran-dalana, noho ny fisondrotry ny fitakiana, raha mandà ny fiondranana any amin'ireo tsy olom-pirenena EU kosa ireo mpitatitra avy amin'ny Vondrona Eoropeana.